Isilinganisi, i-Audio Analyzer nomphumela we-Fade ku-Amarok | Kusuka kuLinux
Mhlawumbe inkinga (enesixazululo sayo) engikulethela yona ngezansi yabanye abasebenzisi ibicacile, noma bebekwazi, kepha ngithole nje yingakho ngiyihlanganyela nawe uma kwenzeka umuntu othile esesimweni esifanayo.
Inkinga ukuthi njengoba ngisebenzisa KDE Bekuhlala kungishaya ukuthi igoli lokulinganisa Amarok ikhutshaziwe. Njengoba ngivame ukusebenzisa njalo ClementineHhayi-ke benginganakile ngalolu daba kuze kube izolo luqala ukungikhathaza.
KDE isebenzisa uhlaka lwamadivayisi we-Audio nevidiyo abizwa Phonon, futhi lapho sifaka I-ArchLinux con KDE, ihlala isibuza ukuthi iyiphi injini esizoyisebenzisela uhlaka olushiwo.
Ngokuzenzakalelayo kuza phonon-vlc futhi ngeshwa, leyo njini ayivumeli Amarok sebenzisa isilinganisi. Liyini ikhambi? Yebo, kusobala: Faka i-phonon-gstreamer.
Endabeni Debian kumele:
Lapho ufaka le phakheji ku Debian con I-KDE 4.8, ithole ngokuzenzekelayo I-GStreamer njenge-Default Engine ku Izintandokazi Zesistimu »Imultimedia» Phonon »Injini.
Kepha esimweni se I-ArchLinux con I-KDE 4.11.2 Bekufanele ngiyenzele ngokuzenzakalelayo ku Izintandokazi Zesistimu »I-Multimedia» Izintandokazi Zomsindo Namavidiyo »Injini, aphume angene futhi.
Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, Amarok Ngingeze i- Isihlaziyi somsindo, imiphumela Iyaphela futhi inketho yokusebenzisa i I-Equalizer.
Ngikushiya ividiyo encane engiyenze ngezizathu ezintathu: Okokuqala, ukuhlola amaqembu ku Vimeo yephrojekthi @ 10inFromLinux. Okwesibili, ukubona ukuthi kusebenza kanjani. Okwesithathu, ukubona ukuthi amavidiyo abukeka kanjani kule ngxenyekazi, ngakho-ke noma yimiphi imibono, iziphakamiso noma ukugxeka kuzokwamukeleka 😛
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Isilinganisi, i-Audio Analyzer nomphumela we-Fade ku-Amarok
Okudabukisayo ukuthi i-phonon vlc namanje ayisekeli izinketho ezinjenge-updater e-Amarok, ngithi ngibuhlungu ngoba inikeza ikhwalithi yomsindo ephezulu kune-gstreamer.
Hhayi, bengingeke ngazi ukuthi ngingaqhathanisa kanjani ikhwalithi yomsindo .. Wazi kanjani?
Yebo, kungenxa yokuthi i-VLC phonon isebenzisa izihlungi nezithuthukisi ezitholakala kwisidlali se-VLC, lapho ingadlala khona ama-audi wekhwalithi ephezulu njengemithombo ye-bluray.
Vele, ukubabona, ngeke kuhlale kwanele ngezipikha ezijwayelekile ze-PC noma kufakwe kuma-laptops adlala i-mp3 ku-96 kbps.
Enye indaba kulapho unekhadi lomsindo eliphakathi nendawo (i-Good DAC + amplifier) ​​nezipika noma ukuqapha ama-headphone ukudlala amafomethi afana ne-FLAC noma i-ALAC, noma i-CD.
Nayi itafula lokuqhathanisa.
Mmm kuyathakazelisa .. Siyabonga ngolwazi, ukuthi kulokhu komsindo ngiyi-neophyte ngokuphelele.
i-vlc-gstreamer iyisihloko esixoxwa kaningi, njenge-kde-gnome. IGstreamer ayifaki ukufiphala (nabanye abanamalungelo obunikazi) ngezizathu zomthetho, ngakho-ke bathengisa ngokushelelayo. Umphakathi waseGstreamer mkhulu kakhulu, usekela amaphrojekthi ahlukahlukene, futhi unokuxhumana okuthile ne-fluendo ngesitayela se-wine-crossover. Kuyaxaka ukuthi leli khasi olikhulumile lithi ele-linux kuphela, kepha i-wikipedia ithi “Idizayinelwe ukuba nesiphambano, iyaziwa ukuthi isebenza kuLinux (x86, PowerPC ne-ARM), iSolaris (Intel ne-SPARC)…. njll. Ukuthi umsindo uzwakala kanjani futhi kuyindaba engaconsi phansi futhi ezincomelayo, ngincamela ukuthatha eminye imingcele.
Hhayi, angicabangi ukuthi benginokuzithoba ekuphawuleni kwami, chaza ukuthi ngincike ekhonweni ngalinye lokukhiqiza kabusha amafayela asezingeni eliphakeme, ngisebenzisa njengamapharamitha i-bitrate, izihlungi (ukunciphisa umsindo, ukujwayela nezinye izinto), konke lokho kungakhombisa ngezinombolo, ngakho-ke akusikho ukuzithoba.
Singabona okufanayo kunoma iyiphi ifomethi ye-multimedia enamazinga ahlukene wokucindezela ngokuya ngamafomethi ayo.
Ifayela le-RAW lisekela ikhwalithi ephezulu kune-JPG, futhi yize lingaqashelwa ngaso sonke isikhathi, okubalulekile ukuthi leli khono elengeziwe likhona, ukuze kuthi lapho lidingeka, lisetshenziswe.
Okunye okunye kuyinkinga ehlukile.
Futhi njengoba usho, ngumbuzo ofana ne-KDE-Gnome.
Lapho lapho izingqinamba ezizodwa zishiywa eceleni, njengokubukeka noma ukusetshenziswa okulula, i-KDE ingaphezulu, iba modular futhi inezinto ezengeziwe ezingenayo iGnome.
Ngisanda kufunda ukuphawula kwakho, bengingazi lutho nge-gstreamer fluendo! umehluko we-mp3 awukho esimweni esifanele, ufinyelela kuma-bass kahle, futhi ingxenye yawo yamahhala ise-debian. Ngifaka i-pulseaudio ukuhlukanisa iziteshi ngesitayela samawindi 7, yize ngifundile ukuthi nge-kde akuvamile ukuthi nihlalisane kahle. Mhlawumbe yingakho i-trio KDE, vlc ne-alsa
Ngingasho ukuthi enye indlela, i-gstreamer + pulseaudio, umbhangqwana ongahlulwa lutho. Kepha umsindo uyindawo yokuzithoba ngakho: S
Uma uqala ukulalela umculo nge-Beats Audio, uzojwayela ngokushesha ukweqa ngokweqile nama-bass. Ngakolunye uhlangothi, uma usebenzisa iBeyerDynamic, ungakujabulela ukuhlanganiswa kwekhadi lomsindo lochwepheshe, ikhwalithi yomsindo emnandi enayo.
Noma kunjalo, wonke umuntu ujwayela isitayela ngasinye somculo nokuthi basilalela kanjani.
Ngiyabonga u-Elav. Uhlala ucwaninga futhi unikeza
izixazululo. Umnikelo omuhle kakhulu.
Wamukelekile, kuyohlale kunomuntu onokungabaza okufana nokwami ​​😉
Ngiyabonga ngemininingwane u-Elav, manje sengiyaqonda ukuthi kungani kokunye ukusatshalaliswa kwe-KDE umsindo ungangisebenzeli kahle kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Kuyathakazelisa. Ngaphezu kwalokho, ikhadi lami lomsindo lingazwakala "lingconywana" nge-Amarok. Ake sibheke ukuthi ngabe ngiyilayisha yini ividiyo yami kuVimeo mayelana nesifundo engingasenza (ngokushesha nje lapho ngithenga i-webcam yami nemakrofoni yayo efanele).
O, kanti futhi, bengingazi ukuthi lelo yizwi lakho.
Akusilo izwi lami, ngifaka izihlungi nemiphumela kuyo ukuze ingabonakali futhi ingezwe ku-database ye-NSA U_U
LOL! Okwesikhashana, bengicabanga ukuthi izwi lakho liphakeme kakhulu. Noma kunjalo, ngoba okungenani ngiyakwazi ukwenza izwi lami, angicabangi ukuthi bayalibona.
Yebo ..., i-NSA inentshisekelo enkulu yokwazi ukuthi i-elav yamaphekula yenzani i-XD
Nokho, kunamahemuhemu okuthi amaseva abo abebezowasebenzisa ashisiwe (angicabangi kanjalo).
ahh, elav; Ngabe usebenzisa isitebela se-debian (se-kde 4.8)? A inginikeze izinkinga ezinkulu impela kwi-netbook. UKwin uyakhasa. Imidwebo iyi-Intel yakudala kulawa ma-netbook. Kuyihlazo ngoba bengifuna uhlelo oluzinzile, manje ngizohlola ukuze ngibone ukuthi kwenzekani. Sanibonani.
Mhlawumbe kuyizinkinga zomshayeli. Mina, ngine-Debian Wheezy efakwe kwikhompyutha yami ye-5570 HP DC2006, angibanga nezinkinga eziningi ngemidwebo.
Yebo, ngine-Stable Debian kukhompyutha yami yomsebenzi futhi i-KDE isebenza kahle kimi.
Silingana. I-KDE 4.8.4 isebenza kahle kimi kuDebian Wheezy.
Ngisebenzise kaningi i-KDE futhi angikaze ngikubone lokhu, kunjengoba umphathi wami ethi izinto zilula kulabo abazaziyo xD
Ngisebenzise i-Amarok ngesikhathi esithile kepha ngeqiniso angikaze ngikubone lokhu kusebenza .__.